Phupha ngeTattoo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I tattoo luphawu oluphawula ukuphela kobusuku kumajoni asebenza emkhosini. Ukusuka kuyo kubizwa ngokuba yi-Great Zapfenstreich. Ngumsitho wasemkhosini wokuhlonipha abezopolitiko abakumgangatho ophezulu.
Ukuba siphupha umvambo njengophawu, lunokwenzeka ngokunxulumene neentsingiselo zombini. Nokuba siyayiva itattoo njengophawu lokulala ngoku okanye siphupha ngokuba yinxalenye ye tattoo enkulu. Singatshintshwa kwiofisi yezopolitiko kwimeko yamaphupha, kodwa sinokubakho kuphela njengeendwendwe ezingabandakanyekanga. Athetha ntoni kanye kanye la maphupha?
1 Isimboli sephupha «Zapfenstreich» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli sephupha "Zapfenstreich" - ukuchazwa kwengqondo
3 Isimboli sephupha "Zapfenstreich" - ukutolika ngokomoya
Isimboli sephupha «Zapfenstreich» - Ukutolikwa ngokubanzi
I tattoo inokuba neentsingiselo ezahlukeneyo njengophawu lwephupha. Ngokusisiseko ibonisa Indibano yoluntu phakathi. Ixhoba linabahlobo abaninzi kwaye lihlala kakuhle nabanye abantu. Akukho nzima kuye ukuya kubantu angabazi kwaye enze unxibelelwano olutsha. Ngesi sizathu, akufane uzive ulilolo okanye ulilolo kubomi bemihla ngemihla. Uhlala enabahlobo abamngqongileyo kwaye uyonwabela iiyure zokuzonwabisa kunye.
Ukuba uva umvambo ephupheni, ngamanye amaxesha oku kunokuba njalo. Ukuphazamiseka uphawu. Oku kunxulumene ikakhulu nobomi bothando lomntu kuthethwa ngaye. Imeko ethile okanye uxanduva lukuthintela ukuba ungonwabi ngokupheleleyo umanyano neqabane lakho.
I tattoo enkulu inokuba luphawu olukhulu lwamaphupha. Jonga kwi Bonisa. Ukuba umntu ophuphayo ngumntu owongwa ngetattoo enkulu, uzuze lukhulu ekuvukeni ubomi kwaye uyaziwa ngoontanga bakhe. Nangona kunjalo, ukuba ungomntu obukele ongachazwanga, iphupha elo amandla ngakumbi kunye nokuphuhlisa amabhongo. Indlela yokuphila yomntu ochaphazelekayo ifuna ukuzibophelela okukhulu.
Isimboli sephupha "Zapfenstreich" - ukuchazwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, umvambo uhlala ubonakalisa oko Ukuphela kwexesha lokuphila okanye inkampani ethile. Oku kunokuhambelana nobomi bobuchwephesha okanye kwinqanaba labucala. Ngokoluvo lwee-psychoanalysts, iqela elinomdla liyakwazi ukuwugqiba umcimbi kwaye ngokwenza njalo lijongeka linethemba kwikamva.
Ngamanye amaxesha, tattoo inokutolikwa kwimeko yezomkhosi ngqo. Isimboli sibhenela ekuphupheni kamva ngobomi bakhe ngakumbi Ulwakhiwo nika. Kukwanokwenzeka ukuba umntu ekubhekiswa kuye angabinangxaki nabasemagunyeni. Akathandi ukuthethwa kwaye akakwazi ukubona isidingo sokunikezela kwimiyalelo ephezulu kwiimeko ezithile.
Isimboli sephupha "Zapfenstreich" - ukutolika ngokomoya
Ngokwendlela yokomoya, isimboli esithi "Zapfenstreich" sithetha ulungelelwano kunye nolwakhiwo. Oku kuvumela iphupha ukuba liqhubele phambili ukukhula kwakho ngokomoya.
Iphupha malunga ne-acrobatics